Posted by mbma at Thursday, December 30, 2010 No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူ ...
Posted by mbma at Saturday, November 13, 2010 No comments:
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျခံနေရသော..ကိုမြအေး သမီး..မဝေနှင်းပွင့်သုန် ..ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုရုပ်သံမှတ်တမ်း
ဝေနှင်းပွင့်သုန် (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုမြအေး သမီး) ရဲ့ အမှာစကား
စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၀
ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက် မဝေနှင်းပွင့်သုန်က မန်ချက်စတာမြို့တွင် ပြုလုပ်သော လေဘာပါတီ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးသို့ ယမန်နေ့က တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်း ပြောခွင့် ရခဲ့သည်။
ထိုမိန့်ခွန်းမှာ အလွန် ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ၊ အင်တာနက်မှ ကြည့်ရှုသူများ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ကြသော မိန့်ခွန်း ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ် အသံထွက်ဖြင့် ပြောကြားသော ထိုမိန့်ခွန်းတွင် မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ထိထိမိမိ ဖော်ပြသွားသည်။
မဝေနှင်းပွင့်သုန်၏ ဖခင် ကိုမြအေးသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က အင်းစိန်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရရာမှ မကြာသေးမီက ကယားပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ထောင်များသို့ ပို့ဆောင်ခံရသည်။ ကျန်းမာခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
လေဘာပါတီ အစည်းအဝေး မိန့်ခွန်းပြောရာတွင် မဝေနှင်းပွင့်သုန်က ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်စီ ချမှတ်ခံထားရသော ဖခင်နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အဖြူရောင် အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားသည်။
၆ မိနစ်ကျော်ကြာ မိန့်ခွန်းကို ဘီဘီစီ သတင်းဌာနက တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ (ဤနေရာ http://enigmaimages.wordpress.com/2010/09/27/waihnin-pwint-thon-speaks-for-burma-and-political-prisoners-at-the-uk-labour-party-conference/ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်)
ဗြိတိန် အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယဆိုင်ရာရုံး (FCO)က စီစဉ်သည့် ၆ မိနစ်ကြာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တခုတွင်လည်း မဝေနှင်းပွင့်သုန် အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရိုက်ကူးထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ My Burma, My Voice: Waihnin's Story ဟု အမည်ပေးထားသည့် ထိုမှတ်တမ်းကို http://www.youtube.com/watch?v=gfzylYuz62Q&feature=related ကို တွေ့နိုင်သည်။
မဝေနှင်းပွင့်သုန်သည် BCUK ခေါ် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသည့် Burma Campaign UK တွင် တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေသည်။
Posted by mbma at Tuesday, September 28, 2010 No comments:
နိုဝင်ဘာ ၁၃ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရမည်
Posted by mbma at Friday, September 17, 2010 No comments:
ကျုပ်တို့ လက်ပိုက်ကြည့် နေကြမလား ?
Posted by naynimin at 12:29 PM
ဗမာပြည်ဖွားညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျား.... နအဖအလိုတော်ရိများဟာ ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ ဘာလင်မြို့ မှာ ဝါဒဖြန့်ချီရေး ဆွေးနွေးပွဲတခုကိုကျင်းပပါတော့မယ်။ သူတို့ တွေကတော့(ဦး)ခင်ဇော်ဝင်း နဲ့ (ဦး)နေဝင်းမောင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ တွေဟာ နအဖ ရဲ့ အသံ ကို မီဒီယာ တချို့ ရဲ့ အားကိုးနဲ့ ဝါဒဖြန့် ချီဘို့ ဂျာမဏီ မြေပေါ် ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြပြီ။ `၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗမာ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးအတွက် အခွင့်လမ်းတခုဖြစ်တယ် ` ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အပါအဝင် တခြားသော နအဖ လှည့် ကွက်ခေါင်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေနဲ့ ဂျာမန်အစိုးရဂျာမန်လူထုကိုလှည့် စားပါတော့မယ်။ ဒါကို ကျုပ်တို့ လက်ပိုက်ကြည့် နေကြမလား ? ရွှေဗမာများနဲ့ ဂျာမန်မိတ်ဆွေများ ဘာလင်တွင် စုပေါင်းကန့် ကွက်ကြမည်။
အချိန်........ နံနက် ( ၁၀ ) နာရီ မှ ( ၁၂ ) နာရီခွဲ
နေ့ ရက် .... ၁၇ ရက် စက်တင်ဘာလ 2010 ( သောကြာနေ့)
နေရာ Friedrich-Ebert Stiftung
ညီညွတ်ကြပါစို့ !!!!! ဆက်သွယ်ရန်..........
ကိုအောင်သူ 02212 053 974 begin_of_the_skype_highlighting 02212 053 974 end_of_the_skype_highlighting
ကိုဆန်နီ 01735 347 534 begin_of_the_skype_highlighting 01735 347 534 end_of_the_skype_highlighting
ကိုမင်းမင်း 06940 036 073 begin_of_the_skype_highlighting 06940 036 073
Posted by mbma at Tuesday, September 14, 2010 No comments:
Bmycharity.com fundraising page: Wai Hnin - Online fundraising - The Burma Campaign
Posted by mbma at Friday, September 03, 2010 No comments:
Posted by mbma at Wednesday, August 25, 20102comments:
ထိုင်းတွင် တရားမ၀င်နေသူ ၂ သိန်း ခန့်ကို အမြဲတမ်းနေခွင့်ပေးရန် စီစဉ်
Posted by mbma at Sunday, August 22, 2010 No comments:
DKBA နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ပြီ
Posted by mbma at Thursday, August 19, 2010 No comments:
ဂျာမဏီရောက်မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတို့၏ ၈လေးလုံးပုံရိပ်အချို့(Berlin, 2010)
Posted by mbma at Tuesday, August 17, 2010 No comments:
Rohingya Press TV 21 Jan 2009
Posted by mbma at Monday, August 16, 2010 No comments:
Thingan Gyun Q&A - 4.wmv
Ramadam Mubarak 2010
M.B.M.A မောင်နှမများအပေါ်သို့အလ္လာအသျှင်မြတ်၏ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအဖြာဖြာမင်္ဂလာအပေါင်း၊ရမ္မဿန်လမြတ်ကိုအကြောင်းခံ၍ပေးသနားတော်မူပါ။ အာမီန်း.....
Posted by mbma at Wednesday, August 11, 2010 No comments:
ဒီမိုး ... ဒီရေ ... ဒီလူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ.......
နေသန်မောင် | ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၀၆ မိနစ်
အထူးကဏ္ဍ - ၈ လေးလုံး အထူး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ်တုန်းက လူသိန်းပေါင်းများစွာ လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ပြီး
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်က တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို
ဖျက်သိမ်းပြီး ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ ပြောင်းလဲရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
မြန်မာပြည်ဟာ နှစ် ၂ဝ အတွင်း ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို
ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့
ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ရပ် မပေါ်ထွန်းခဲ့ပါဘူး။
ဒီအတွက် တိုင်းပြည်ကို သံကွန်ခြာအထပ်ထပ် အောက်မှာထားပြီး အုပ်ချုပ်လာတဲ့
စစ်တပ်ကို သမိုင်းရဲ့ တဦးတည်းသော တရားခံအဖြစ်နဲ့
လက်ညှိုးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ် ၂၀ ကျော် ကြာလာတဲ့အခါ စိတ်နာလက်စ
ရှိထားပြီးသားမို့ အာဏာကို မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်တပ်ကို ပိုပြီး
အချုပ်ပြောရင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့
ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ပါဝင်ခွင့်မပေးဘဲ
အကျဉ်းချထားတာကြောင့်ရယ်၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ ကျောင်းသား၊ လူငယ်၊
ရဟန်းရှင်လူ၊ ပြည်သူတွေကိုပါ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် မြန်မာပြည် ပြင်ပက ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေက
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းတိုင်းမှာ၊ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့
စကားလုံးတိုင်းမှာ၊ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ ပြောနေကျ
အဆုံးသတ်စကားကတော့ မြန်မာပြည်အရေးဟာ ရှေ့မတိုး၊
နောက်မဆုတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ထပ်တလဲလဲ ပြောနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်အခြေအနေဟာ ဘယ်ကိုမှ ဦးတည်မသွားဘဲ ရပ်နေပြီဆိုတဲ့
သုံးသပ်ချက်ဟာ သန်းပေါင်း ၅ဝ ကျော် မြန်မာပြည်သူတွေကို
စိတ်ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ရောက်စေပါတယ်။ အားသွန်ခွန်စိုက် လှော်ခဲ့တဲ့လှေဟာ
ဘယ်ကိုမှ မရွေ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း သိသွားတဲ့အခါ နောက်ထပ်
လှော်ချင်စိတ်မရှိဘဲ ခြေကုန်လက်ပန်း ကျသွားစေပါတယ်။
တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကြည့်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူ့မျက်နှာ ကြည့်တာကို ဆိုလိုတာပါ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့်အရာကို
၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်က လမ်းညွှန်မြေပုံ ၇ ချက်ကို
ကြေညာချိန်ကစပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး
လှုပ်ရှားသူတိုင်းက အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအချိန်ထိလည်း ဒီမြေပုံ ၇ ဆင့်ဟာ တဆင့်ပြီးတဆင့် ပြီးလာလိုက်တာ
နောက်နှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတော့မယ့် အခြေအနေထိကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊
မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဆိုက်ရောက်လာပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အနှစ် ၂ဝ
မြန်မာပြည်သမိုင်းထဲမှာ ဒုတိယအကြိမ် ပွဲအဆူဆုံး နိုင်ငံရေးပွဲတခုဆိုတာ
လူတိုင်းသိထားတာမို့ ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတိုင်း (အထူးသဖြင့်
ပြည်ပရောက်) က အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ မိသားစုတစုအတွက် နေ့လည်စာ၊ ညစာအပြင်
လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ စတဲ့ အကြောင်းဟာ နေ့စဉ် ငရဲဖြစ်ပေမယ့်
ပြည်ပရောက်တွေအတွက် ခေါင်းထဲ ထည့်စဉ်းစားဖို့ မလိုတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးမှာ ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးလို့ အော်လိုက်ရုံနဲ့တင်
အသက်သာဆုံးသော နိုင်ငံရေးကို စလုပ်လို့ ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုကို
ထောက်ခံတိုင်း ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား၊ အင်အားစုဖြစ်တယ်လို့ ခံယူပြီး
နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးက ဘယ်ကိုမှမရောက်တဲ့
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘာကြောင့် ဆန့်ကျင်တာလဲ၊ ဘာကြောင့် သဘောတူ
လက်ခံရမှာလဲ။ ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေကတော့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို
မေးခွန်းပြန်ထုတ်ပါတယ်။ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အဲဒီ ရွေးကောက်ပွဲ
ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ ဒီကနေ့ထိ အာဏာတည်နေတဲ့ စစ်တပ်က အကောင်အထည်မဖော်ခဲ့ဘူး။
မဲအပြတ်အသတ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အာဏာလွှဲစေချင်တယ်။
အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲမယ် ဆိုရင်တောင် သူတို့က ဦးစီးပြီး ရေးဆွဲချင်တယ်။
ပြောရရင် စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ကန့်သတ်လိုက်လိုတယ်။
စစ်တပ်က စကတည်းက သူတို့ရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် လုံခြုံရေးအတွက်
အာမခံချက်ရနိုင်မယ့် အခြေခံဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ယူချင်တယ်။ နိုင်ငံ
မပြိုကွဲဖို့ စစ်တပ်က နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို
အဲဒီတော့ နှစ်ဖက်စလုံး ဘယ်လိုမှ ညှိလို့မရတာကို အသေအလဲ
ဆက်ကိုင်ထားကြရင်း၊ အမှန်တရား၊ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ အပြစ်တင်မှုတွေကိုသာ အဓိက
အားပြိုင်ကြရင်း တိုင်းပြည်က အပျက်ဘက်ကို ပိုမို ကျဆင်းလာပါတော့တယ်။
၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အကောင်အထည် ဖော်၊ မဖော်ကို ဒေါ်စုနဲ့
စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ စကားပြောရမယ်လို့ တောင်းဆိုတယ်။ စကားမပြောဘူး။
ဒေါ်စုအပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ အာဃာတတွေရှိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်။ သာမန်အရပ်သား
နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ စကားပြောပြီး အပေးအယူလုပ်မှ အခြေအနေတွေ
ပြေလည်မယ်ဆိုတာကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက မယုံကြည်တာလည်း ဖြစ်မယ်။
အတိုချုပ်ကတော့ ကုလသမဂ္ဂ မကလို့ ဘယ်သူပဲ ဖိအားပေးပေး ဒီစကားပြောတဲ့ကိစ္စ
နောင်ကိုလည်း လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း သိပ်နည်းပါတယ်။ တောင်အာဖရိကဖြစ်ရပ်ကို
စိတ်ကူးယဉ်နေလို့ကတော့ အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးသွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်စုတို့ကြား တနည်းပြောရရင်
အာဏာလက်ရှိ စစ်တပ်နဲ့ အာဏာလက်မဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး အင်အားစုကြားက ပဋိပက္ခဟာ
လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားကြည့်ရင် ဒီပြသနာဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြေလည်စရာမရှိဘူး။
နောက်ထပ် အနှစ် ၂ဝ ထပ်ကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်ကိုကြည့်ပြီး
ခန့်မှန်းရင် လွယ်တယ်။ အရက်စက်ဆုံးသော အမှန်တရားက ဒါပဲ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကုန်အစင် ပြန်လွှတ်ရမယ်၊ ဒေါ်စုကိုလည်း
ပြန်လွှတ်ရမယ်၊ ပြီးရင် ဒေါ်စုဦးဆောင်တဲ့ အန်အယ်ဒီပါတီနဲ့ လက်ရှိ
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ စကားပြောပြီး အပေးအယူလုပ်ရမယ်၊ ပြီးရင်
တယောက်တဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တယောက်တည်းက အကုန်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ် အာဏာယူပြီး
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်ရမယ်၊ ပြည်ပရောက်တွေ အကုန် မြန်မာပြည်
ပြန်လာခွင့်ရမယ်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာတွေ ရပ်ဆိုင်းရမယ်၊
တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့ နိုင်ငံတကာက ငွေကြေး၊ နည်းပညာ၊ လူအားနဲ့
အကုန်ထောက်ပံ့ရမယ် .... စသဖြင့် ဒီအချက်တွေဟာ တခုမှ ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်
ကုလသမဂ္ဂကို ဒေါသလှည့်ထွက်လိုက်၊ အာဆီယံနဲ့ တရုတ်ကို အပြစ်တင်လိုက်၊
အိန္ဒိယနဲ့ ဂျပန်ကို စိတ်ဆိုးလိုက် နောက်ဆုံးတော့ စစ်တပ်ကို လက်ညှိုးထိုး
...။ ဒီပြဇာတ်တွေဟာ အသေအချာ ရေတွက်ထားတာ မဟုတ်တောင် အဖန်တလဲလဲ
ကခဲ့ရတာကတော့ သေချာတယ်။ မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝက ပိုပြီး
ထောင်းထောင်းကျေပြီး တိုင်းပြည်အနာဂတ် ပိုမဲ့လာတာပဲ ရှိတယ်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အချိန်နီးလာတာနဲ့အမျှ ပြည်ပရောက်တွေရဲ့
ဆန့်ကျင်ရေး လေသံတွေက ပိုပြီး ကျယ်လောင်လာတယ်။ ဒီလိုအော်မှ
ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်တာလို့၊ ယုံကြည်ချက် ခိုင်မြဲတာတို့နဲ့
လိပ်ပြာသန့်ချင်နေကြပုံ ရတယ်။ ထောင်ကျတန်းကျ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအပေါ်
လူနာတယောက်ကို ဆရာဝန်တယောက်က ခင်ဗျားမှာ သွေးကင်ဆာရောဂါရှိနေတာ
ရာခိုင်နှုန်း အတော်များတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် အဲဒီလူနာ
ဘာပြန်ပြောမယ်ထင်လဲ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ၊ ကျနော်သိပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေမယ်များ
ထင်မိရင်တော့ လွဲမှာပဲ။ ဘယ်ရမလဲ။ ဒီမှာဆရာဝန် ခင်ဗျားပြောတာ မယုံဘူး။
ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် သိတယ်။ ဒီရောဂါရှိတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လူနာ (၉၉ %) က
ပြန်ဖြေမှာပဲ။ ကြိုက်ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက် ... ရှောင်လို့မရတဲ့
အမှန်တရားအပေါ် ရုတ်တရက်တော့ လူတိုင်းက ငြင်းကြပါတယ်။ ငြင်းဆန်တဲ့
ဒီကင်ဆာနဲ့ သေရမယ့်အချိန် နီးကပ်လာတော့မှ လူနာက မဖြစ်မနေ အခြေအနေတခုကို
လက်ခံရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒီလူနာဟာ အကျိုးမဲ့၊ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ပြီး
သေဖို့အတွက် ဘာတခုမှ မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူး။
မြန်မာပြည်အရေးအတွက် အမေရိကန်ဦးဆောင်ပြီး ကုလတပ်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်
ဝင်သိမ်းပေးမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ (၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ) ၁၉၈၈
ခုနှစ်ကလို ဒီမိုကရေစီ အရေးအခင်းကြီးလည်း ထပ်မပေါ်လာနိုင်တော့ဘူး၊ (၂ဝ၁ဝ
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ) လုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း အရေးယူနိုင်တဲ့
အခြေအနေမှာ မရှိဘူး၊ (၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ) ဒေါ်စုနဲ့
စစ်တပ်ကြား စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပေါ်လာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊
(၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ) အာဆီယံနဲ့ တရုတ်က မြန်မာပြည်ကို
အရေးယူမယ့် အခြေအနေ လုံးဝမရှိဘူး၊ (၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ)
ဒေါ်စုလည်း အချုပ်အနှောင်က လွတ်လာဖို့ မရှိဘူး၊ (၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ
မတိုင်ခင်မှာ) မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာကို
အရေးယူမယ့်ကိန်း မရှိဘူး၊ (၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ) .....
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက ဆန့်ကျင်ကြပြီထား။ ပြည်သူတွေက
ဘယ်သူ့ကို မဲပေးရမှာလဲ။ ဒီတော့ လွှတ်တော်အမတ်နေရာတွေ ဝင်လျှောက်ကြမယ့်
ကြံ့ဖွတ်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေကိုပဲ မဖြစ်မနေ မဲပေးရမယ့်အပေါက်
ဆိုက်နေပြီ။ ဒီလိုလုပ်မယ့်အစား လူထုအတွက် စွမ်းအားရှင်ထက်၊
ကြံ့ဖွတ်ထက်သာတဲ့ သူတွေကို ကြိုတင်ရွေးချယ်ပြီး လူထုကိုယ်စားလှယ်လုပ်ပြီး
ဝင်ပြိုင်စေတာက ပိုပြီး အကျိုးမရှိစေဘူးလား။
ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်တာက နအဖ ဆန့်ကျင်တာပဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိရင်၊
ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေအောက်က လူထုကို သက်သာရာရစေမယ့် အနေအထားမျိုး
ရွေးချယ်ပေးတာက တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကြည့်ရာ မရောက်ဘူးလား။
ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံတာဟာ စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံတာနဲ့ မတူဘူးဆိုတာ
နည်းဗျူဟာအရ အသေအချာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်က
ကြည့်သလိုပဲ စစ်တပ်ဘက်ကလည်း မြန်မာပြည်က ဘက်နှစ်ဘက်ရဲ့ ပဋိပက္ခဟာ ဘယ်ကိုမှ
မရွေ့ဘူးဆိုတာကို လက်ခံကြပုံ ပေါ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ လက်ရှိရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး
အခင်းအကျင်းဟောင်းကြီးကို ခဝါချလိုက်နိုင်ရင် အခင်းအကျင်းသစ်တခုကို
ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ ယူဆဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေ၊
နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထဲ ပါဝင်ချင်သူတွေက ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်
လွှတ်တော်ထဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားထဲ ဝင်ရောက်နိုင်ရင် ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့
အပေးအယူလုပ်နိုင်ပါမယ်။ ဟုတ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းထုတ်လာရင်တော့
ဒီအတိုင်း ထိုင်နေလို့တော့ ပြည်သူအတွက် ဘာကောင်းလာမလဲ ဆိုတာကိုသာ
ပြန်မေးရမှာပဲ။ ဒီလို အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ရမယ့် လူထုအကျိုးအတွက်
လုပ်ရမယ့် နိုင်ငံရေးမျိုးကိုတော့ အားမပေးဘူး၊ သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြတာတွေကသာ
ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါ့မလား မေးခွန်းကို ပြန်ဖြေစရာ
နောက်တခုက ဒီရွေးကောက်ပွဲထဲမှာ စစ်တပ်ဘက်နဲ့ ဒေါ်စုဦးဆောင်တဲ့
ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးက မဟုတ်တဲ့ကြားက အင်အားစုတွေ ပေါ်ထွက်လာစေဖို့
အားပေးသင့်ပါတယ်။ ကြားအုပ်စုတွေ မပေါ်နိုင်အောင် ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် ယခင်မူလ
ပဋိပက္ခဟောင်းဆီကိုပဲ ပြန်ဦးတည်သွားပါမယ်။ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံတယ်လို့
အော်တိုင်း ဒီမိုကရေစီအရေး လုပ်နေတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဒေါ်စုကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးကို တကယ်ယုံကြည်ပြီး
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူတာက ဒေါ်စုကို
အဖြေကတော့ လက်တွေ့ကျကျ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ ၁၉၈၈ မှာ မွေးခဲ့တဲ့
ကလေးတွေဆို အခု ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ သူတို့က မြန်မာပြည် ၂၁ နှစ်အတွင်း
ဘာ့ကြောင့်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာလဲလို့ မေးလာခဲ့ရင် ပြည်သူအတွက်
သတ္တိရှိရှိ မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံရေးကို မလုပ်ခဲ့ဘဲ၊
အာဏာမယူရဲခဲ့လို့လို့ ဖြေလိုက်ကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါက ရက်စက်တဲ့
အမှန်တရား ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ။
(နေသန်မောင်သည် ယခင်က သတင်းအယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မြောက်ကာရိုလိုင်းနား တက္ကသိုလ်တွင် ရုပ်ရှင်၊
ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘာသာရပ်များ သင်ယူနေသူ
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ
Posted by mbma at Saturday, July 24, 2010 No comments:
Posted by mbma at Sunday, July 18, 2010 No comments:
တချို့ ကတော့ နေကောင်းပါစေတဲ့
တချို့ ကတော့ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ပါစေတဲ့... ... See More
တချို့ ကတော့ အသက် ရာကျော်ရှည်ပါစေတဲ့
တချို့ ကတော့ အမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေတဲ
တချို့ ကတော့ ......
တချို့ က ............. ။ ။
ဆယ်စုနှစ် တခု ကျော် နှစ်ခု နီးပါး
အမေ့ မေတ္တာ ငတ်နေရရှာတဲ့
အမေပျောက်နေတဲ့ သားငယ် နှစ်ယောက်
တခါမှ သူမ ချီပွေ့ ခွင့်မရနိုင်သေးတဲ့ မြေးငယ်တွေနဲ့ 
အမြန်ဆုံး တွေ့ ခွင့်
အမေတယောက်ရဲ့ မေတ္တာ လွှမ်းခြုံ ပေးခွင့် ရ နိုင်ပါစေ လို့..................။
ခင်ဗျားတို့ ရော ကျနော်ရော
ဒီ ၆၅ နှစ် မိန်းမအို တယောက်အပေါ်
ကီလို ပေါ် ကီလို ဆင့်
ထပ်၍ ထပ်၍ တင်ပေးနေကြတဲ့ တာဝန်တွေ
သုခ ....... ညီမငယ် မေရှင် ကိုပြောသလို
"နင်မတရား တော့ ဘူးနော်"
သြော် မတရားတော့ ဘူးနော်...............
ကျနော် တို့ခင်ဗျားတို့မတရားတော့ဘူးနော် ။ ။
ခင်ဗျား အမေ ...... ကျနော့ အမေ ဒီအရွယ်ဆို
သူမ ဟာ ၆၅ နှစ်။ ။
ဗဟိန်းတင် (၁၉ ဇွန် ၂၀၁၀)
Posted by mbma at Saturday, June 19, 2010 No comments:
Daw Aung San Su Kyi 65th Birthday
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၅နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲနှင့် မွေးနေ့ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပွဲ
အကိုများခင်ဗျား....... ကျွန်တော်တို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကိုယ်ကျိုးကြည့် စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက် ရေး၊ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတွင်ဒီမိုကရေစီ လူ့ အခွင့်အရေးစနစ် ပီပီပြင်ပြင် ထွန်းကားရေး အတွက် မြန်မာ ပြည်အနှံ့ အပြား စစ်အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှူမျိုးစုံအောက်မှ ယနေ့ အချိန်အထိ အမိ မြန်မာပြည် အပေါ် သစ္စာရှိရှိ တိုက်ပွဲဝင် လျက်ရှိနေကြသော မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများနှင့် နှစ် ပေါင်းများစွာ နေ အိမ် အကျယ် ချုပ်ဖြင့် အမိမြန်မာပြည်အရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှူဖြင့် အဖြေရှာရေးကို တောင်းဆိုနေ သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၅)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကိုဂုဏ်ပြုလျက် မြန်မာ ရေး ရာဌာန (ဂျာမဏီ) နှင့် တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများမှ အောက်ပါအစီအစဉ် အတိုင်း ချီတက်ဂုဏ်ပြု ပြီးဆန္ဒပြကြမည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ့အရေးအတွက် အလေးအနက်စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမ ဆို ပါဝင်ဆင်နွှဲကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
* အချိန်။ ။၁၉.၀၆.၁၀(စနေနေ့ )
၁၃း၀၀ မှ ၁၆း၃၀ အထိ
* နေရာနှင့် အစီအစဉ်။ ။Frankfurt Hauptbahnhof ရှေ့ 
Basaler Platz မှချီတက်၍ Goethe Platz တွင် မွေးနေ့ဖယောင်းတိုင် ထွန်းညှိကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ရေးထားသောကဗျာနှင့်ဓာတ်ပုံပို့ စကဒ်များ ဖြန့်ဝေပါမည်။
* ဆက်သွယ်ရန်။ ။ကိုအောင်သူ(02212053974)၊ကိုသန်းစိုး (01733418195)၊
ကိုစောစိုးနေ၀ါး (015207370974)၊ ကိုလှမြင့်စိုး(01748509485) ကိုမင်းမင်း(01742998635)
Posted by mbma at Sunday, June 13, 2010 No comments:
ကျွန်တော်က သက်မဲ့ စာမျက်နှာများ
ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတို့ အတွက်ကစားကွင်း
ကျွန်တော်က ခင်ဗျားတုိ့ ခေတ်မှာ
တူတာ တစ်ချက်က ခင်ဗျားရော
ကျွန်တော်ပါ အသျှင်မြတ်ရဲ့ ဖန်ဆင်းခံ။
ကျွန်တော့်စာမျက်နှာတွေကို click သွားလိုက်နဲ့
ကျွန်တော့ကို လိုင်းကြောင်လို့ အော်သူကအော်
ကောင်းတယ်လို့ အားပေးသူက အားပေးနဲ့
ဘာသာရေးအတွက် software လေးတွေလုပ်တော့
သန်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့ ညစ်ညမ်း web site တွေ
ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံသားတွေက အားကျ
သန့်ရှင်း တည်ငြိမ် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့
မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် နားလည်လာပြီလေ။
ဘာသာရေးနဲ့ ခေတ်ပညာ အသိဥာဏ်တွေကို
ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုမောင်နှမကြားမှာ
သူတို့ထဲက တစ်ချို့ ခင်ဗျားတို့သာသနာကို စော်ကားလာရင်
copy post by MMSY ( မြန်မာမွတ်စလင် ကျောင်းသားလူငယ်များ)
Visit MMSY at: http://mmsy.org/?xg_source=msg_mes_network
Posted by mbma at Saturday, June 12, 2010 No comments:
First Rohingya delegate visits US congress | Democratic Voice of Burma
Posted by mbma at Monday, June 07, 2010 No comments:
အစ္စလာမ်ဝါဒီ မွတ်စလင်များသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့ဆုံကြသည့်အခါ (အတ်စ္စလာမုအလိုင်ကွန်မ်) “အသင်တို့အပေါ်၌ ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အစုစုသက်ရောက်ပါစေ”ဟုမေတ္တာပို့သကြသည်။မေတ္တာပို့သခြင်း ခံရသူများကလည်း (ဝအလိုင်ကု မုစ္စလာမ် ဝ-ရဟ်မတုလ္လာဟ်၊ ဝ-ဗုရကာတူဟူ)၊ “အသင်တို့အပေါ်၌လည်းငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအစုစုသက်ရောက်ပါစေ။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ဂရုဏာတော်နှင့်မင်္ဂလာတော်များလည်းသက် ရောက်ပါစေ”ဟုမေတ္တာတုံ့ပြန်ကြပေသည်။ဤသို့ဖြင့်မွတ်စလင်တို့စုဝေးရာဌာနများတွင်မေတ္တာသံများသည်ပဲ့တင်ထပ်မျှဖြစ်ရှိနေပေသည်။ “ကျွန်ုပ်သည်မိမိ၏အရှင်အားတိုင်တည်ပြောအံ့။အသင်တို့သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားမယုံကြည်သမျှကာလပတ်လုံးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အားယုံကြည်နိုင်ကြမည်မဟုတ်။ကျွန်ုပ်သည် အသင်တို့အား အသင်တို့အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရန်လမ်းစဉ် ညွှန်ပြမည်။ ထိုလမ်းစဉ်ကား အခြားမဟုတ်။ အသင်တို့ အချင်းချင်း ဖြူစင်ပွင့်လင်းစွာ စလာမ်မေတ္တာကို ပို့သကြကုန်” (တမန်တော်မြတ်၏ ဩဝါဒတော်)
copy from myanmarislam.com
Posted by mbma at Wednesday, April 28, 2010 No comments:
နေထွက်ရင်ထ ညရောက်ရင်အိပ် ငါ့ဘဝတိတ်ဆိတ။် ငွေရရင်ရှာ အချိန်ရတိုင်းလုပ် တန်ဖိုးမဲ့ဘဝမှာ ငုတ်တုတ်။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လုပ်ချင်ရာလုပ် ငါလူမိုက်မဟုတ်။ လူ့တန်ဖိုးကို လူကအလုပ်လုပ် လူဖြစ်တိုင်းသာ တန်ဖိုးရှိရင် လူ။။။။။။လူ တန်ဖိုးရှင်။ စိတ်ရဲ့စွမ်းအား ပြဋ္ဌန်းမထား စိတ်ရှိတိုင်းသာ လုပ်ဖြစ်ရင်လဲ စိတ်၏အရှင် ငါသာပင်။ ဘာသာတရား ခံစားနားလည် စိတ်လိုကိုထ်ိမ်း ငါချုပ်ငြိမ်းဖို့ ငါနဲ့ငါ့စိတ် တိုင်ပင်ကြပြီ။ လောကဝဲလည် ငါ့စိတ်ငါနိုင် ငါပိုင်ပြီးမှ ငါသာလူကောင်းဖြစ်လတ္တံ။ အပြောနဲ့အလုပ် ငုတ်တုတ်ထိုင်နေ လဲလျောင်းကျောခင်း ငါလူ့ငပျင်း။ အိပ်ရမည်မှာ ဓမ္မတာမို့ ဓမ္မတ္တာနောက်လိုက် လူ့အကြိုက်ကို ငါကလဲလုပ် မဟုတ်တရုတ်တွေ ဒါကိုလူသား နားလည်ထားစမ်း။ ဖေချစ်မိုး။
Posted by mbma at Tuesday, April 20, 2010 No comments:
First Rohingya delegate visits US congress | Democ...
ဒီမိုး ... ဒီရေ ... ဒီလူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ဘာဆက်လုပ...
ထိုင်းတွင် တရားမ၀င်နေသူ ၂ သိန်း ခန့်ကို အမြဲတမ်းနေ...
Bmycharity.com fundraising page: Wai Hnin - Online...